Ukuqonda iPhenomenon yeMcdonaldization
Sciences soLuntu Ukufundwa okucetywayo
UMcdonaldization ngumxholo ophuhliswe ngumdlali wezeMerika uGeorge Ritzer obhekiselele kuhlobo oluthile lokulungiswa kwemveliso, umsebenzi kunye nokusetyenziswa okuphakanyisiwe ekupheleni kwekhulu lemashumi mabini. Ingcamango eyisiseko kukuba ezi zinto ziye zatshintshwa ngokusekelwe kwimimiselo yokutya okutya okukhawulezayo, ukulungelelanisa, ukuqikelelwa kunye nokulinganisa, kunye nokulawula-kwaye ukuba oku kulungelelanisa kuneempembelelo eziphazamisayo kuyo yonke imiba yoluntu.
UGeorge Ritzer uqalise umxholo kaMcdonaldi kunye nencwadi yakhe ka-1993, i -McDonaldization yoMbutho. Ukususela ngeli xesha le ngcamango iye yaba yintloko phakathi kwentlalo yoluntu kwaye ingakumbi kwi -sociology yehlabathi jikelele . Inkcazelo yesithandathu yencwadi, eyapapashwa ngo-2011, ikhankanywe phantse amawaka angama-7 000.
Ngokutsho kukaRitzer, iMcdonaldi yoluntu yinto eyenzekayo xa uluntu, amaziko alo, kunye nemibutho yalo zilungelelaniswa ukuba zibe neempawu ezifanayo ezifumaneka kwizixhobo zokutya okukhawulezayo. Ezi zibandakanya ukusebenza kakuhle, ukulungelelanisa, ukuqikelelwa kunye nokumiswa, kunye nokulawula.
Ingcamango kaRitzer kaMcdonaldization kukuhlaziywa kwintlalo yenzululwazi yezobuhlanga uMax Weber yindlela inzululwazi yenzululwazi eyenziwa ngayo i-bureaucracy, eyaba yintsebenziswano ebalulekileyo yeenkcubeko zanamuhla ngekhulu lekhulu leminyaka.
Ngokutsho kukaTeber, ulawulo lwezobugcisa namhlanje luchazwe yimisebenzi yokuzimela, ulwazi olumacandelo kunye neendima, inkqubo efunyenweyo yokuxhaswa kwemisebenzi kunye nokuqhubela phambili, kunye negunya lokusemthethweni lolawulo lomthetho. Ezi zimbonakalo ziyakwazi ukugcinwa (kwaye zisenokuba nazo) kwimimandla emininzi yoluntu ehlabathini lonke.
Ngokutsho kukaRitzer, utshintsho phakathi kwenzululwazi, uqoqosho, kunye nenkcubeko ziye zatshintshela uluntu ngaphandle kwe-bureau ka-Weber ukuya kwisakhiwo esitsha sentlalo kunye nokuyalela ukuba ubiza uMcdonaldization. Njengoko echaza encwadini yakhe yegama elifanayo, lo mgaqo-nkqubo wezoqoqosho kunye noluntu luchazwa ngemibandela emine ephambili.
Ukusebenza kakuhle lubandakanya ukugxila kolawulo ekunciphiseni ixesha elifunekayo lokugqiba imisebenzi nganye kunye nokufuneka ukuba igqibe yonke into okanye inkqubo yokuvelisa nokusabalalisa.
Ukuxilongwa kukugxininisa kwiinjongo ezinokulinganiswa (ukubala izinto) kunokuba zizimeleyo (ukuvavanya umgangatho).
Ukubikezela kunye nokumgangatho kufumaneka kwiinkqubo eziphindaphindiweyo kunye neenkqubo zokuhanjiswa kweenkonzo kunye nokuveliswa kweemveliso okanye amava afana nawo okanye afana nawo (ukuqikelelwa kwimeko yamaxhoba).
Ekugqibeleni, ukulawulwa kweMcdonaldization kuqhutywe ngabaphathi ukuqinisekisa ukuba abasebenzi bavele baze benze okufanayo ngexesha elifutshane kunye nosuku. Kwakhona kubhekisela ekusebenziseni iirobhothi kunye neteknoloji ukunciphisa okanye ukubuyisela abasebenzi abasebenzi apho kunokwenzeka khona.
U-Ritzer uthi le miba ayibonakali kuphela kwimveliso, kumsebenzi, nakumava oboleki , kodwa ukuba ukubonakala kwabo kule mimandla kuqhubeka njengemiphumo ebangelwa kuyo yonke imiba yobomi bentlalo.
UMcdonaldization uthinta ixabiso lethu, ukhetho, iinjongo, kunye neembono zehlabathi, ubuqu bethu kunye nolwalamano lwethu noluntu. Ngaphezu koko, izazi-ntsapho ziyabona ukuba iMcdonaldi yinto yehlabathi, eqhutywa yiinkampani zaseNtshona, amandla oqoqosho kunye nokulawulwa kwenkcubeko yeNtshona, kwaye oko kuqhuba ukuhlalisana kwehlabathi jikelele kwezoqoqosho nezentlalo.
Emva kokubeka indlela iMcdonaldization isebenza ngayo kwincwadi, uRitzer uchaza ukuba le ngcamango emncinci kwi-rationality ivelisa ukungahambisani. Wayebona, "Ininzi ngokukhethekileyo, ukungalingani kuthetha ukuba iinkqubo ezinengqiqo zingenangqiqo. Ngaloo nto, ndiyathetha ukuba bayayiphika isiseko esisisiseko sabantu, isizathu sabantu, abantu abasebenza ngaphakathi okanye abakhonza ngabo." Abaninzi ngokuqinisekileyo bahlangabezane nento uRitzer ichaza apha xa ukubonakala komntu kubonakala ngathi akukho konke okukhoyo kwiintengiselwano okanye amava aphazamiseke ngokunyanisekileyo kwimigaqo nemigaqo yombutho.
Abo ba sebenza phantsi kwezi meko bahlala bebahlalutya njengokuba bahlambalaza.
Oku kungenxa yokuba uMcdonaldization ayifuni abasebenzi abanobuchule. Ukugxila kwiimpawu ezine eziphambili ezivelisa uMcdonaldization kuye kwasusa isidingo sabasebenzi abanezakhono. Abasebenzi kule miqathango baqhuba imisebenzi ephindaphindiweyo, eqhelekileyo, egxininiswe kakhulu kunye neendawo ezinokuthi zifundiswe ngokukhawuleza kwaye zincinci, kwaye ke kulula ukuyifaka. Olu hlobo lomsebenzi luqulunqa abasebenzi kwaye luwususe amandla okusebenzisana. Izazi zenzululwazi ziyabona ukuba olu hlobo lomsebenzi linciphise amalungelo kunye nomvuzo wabasebenzi e-US nakwihlabathi jikelele , nto leyo eyenza abasebenzi basezindaweni ezinjengeMcDonald's kunye neWalmart bekhokelela ukulwa nemali ephilayo e-US Okwangoku e-China, abasebenzi i-iPhones ne-iPads zijongene nemeko efanayo kunye neengxaki.
Iimpawu zeMcdonaldization ziye zangena kumava kumboleki, kunye nabasebenzi abakhululekile abaxhasiweyo kwinkqubo yokuvelisa. Ngaba ikhefu ibhasi lakho kwivenkile yokudlela okanye ivenkile? Yilandela ngokulandelelana imiyalelo yokudibanisa ifenisha ye-Ikea? Khetha iipulole zakho, amathanga, okanye i-blueberries? Zihlolisise kwivenkile? Emva koko uye waba noluntu ukuze uzalise umveliso okanye usasazo lwenkqubo mahhala, ngaloo ndlela usize inkampani ekufezeni ukusebenza nokulawula.
Izazi zezenkolo zibona iimpawu zeMcdonaldi kwezinye iindawo zobomi, njengemfundo kunye neendaba, kunye nokutshintsha okucacileyo ukusuka kumgangatho ukuya kwiimilinganiselo ezingapheliyo ngokuhamba kwexesha, ubuchule kunye nokusebenza ngokudlala indima ebalulekileyo kuzo zombini, nokulawula.
Khangela, kwaye uya kumangaliswa ukufumanisa ukuba uya kubona iimpembelelo zeMcdonaldization ebomini bakho.
Ukuhlaziywa nguNicki Lisa Cole, Ph.D.
Icandelo loLuntu kwiNkcazo yokuFundiswa koLuntu
I-Nickel kunye ne-Dimed: Kwi-Not Found By In America
Umthandazo Wosuku Lomama
6 I-Great Paul Newman Classic Movies